Allgedo.com » 2012 » August » 01
Home » Archive Daily August 1st, 2012 Ergada Ansixinta Dastuurka oo maanta si aqlabiyad leh u Ansixiyay Dastuurka dalka iyo Ra’iisul Wasaare Cabdiweli oo ka qeyb galay (Sawiro) Aug 1, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) – Ergadka Ansixinta Dasuurka Soomaaliya ayaa maanta si aqlabiyad leh ku ansixisay Dastuurka dalka si KMG ah ilaa inta Afti dadweyne loogu qaadayo.
Wasiirka Dastuurka iyo Dib-u-heshiisiinta C/raxmaan Xoosh Jibrill ayaa markiiba ku dhawaaqay in Ergado 96% u codeeyeen dastuurka dalka. Halka inta kalene ay qaarna ay diideen inta kalena ay ka aamuseen. Wuxuuna Sidoo kale Wasiirku... Odayaasha dhaqanka beesha Wagardhaceed ee gudaha iyo dibada oo kalsoonidii kala noqday nabadoon Xasan Cilmi kaddib eedeyn loo jeediyay Aug 1, 2012 Qaar ka mid ah odayaasha, siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo wax garadka qeybaha kala duwan ee beesha Wagardhaceed ayaa shir ay isugu yimaadeen waxay kalsoonidii kala noqdeen nabadoon Xasan Cilmi kaddib eedeyn loo soo jeediyay.
Hoos ka akhri qoraalka ay beesha Wagardhaceed kalsoonida ugala noqotay nabadoon Xasan Cilmi:
Read More → PRESS RELEASE: The African Union Congratulates Somali People on New Constitution Aug 1, 2012 Nairobi, 1 August 2012 -The Special Representative of the Chairperson of the African Union Commission for Somalia, Ambassador Boubacar Diarra has today congratulated the people of Somalia on the adoption of a provisional constitution, saying it was a major step forward on the road to national recovery.
An 825 member National Constituent Assembly, which has been sitting in Mogadishu for the last week,... Dhageyso Khudbadii Ra’iisul waraase C/weli iyo Wasiirka dastuurka ay ka jeediyeen Shirkii lagu anisiyay maanta dastuurka cusub ee Soomaaliya. Aug 1, 2012 Kadib markii maanta Ergada Anisixnta dasruurka cusub ee Soomaaliya ay anisixiyeen dastuurka cusub ee Soomaaliya ayaa hadana waxaa halkaasi khudbad ka jeediyay Ra’iisul wasaare C/weli Maxamed Gaas iyo C/raxmaan Xoosh Jibriil oo ah wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta.
Ra’iisul wasaaraha ayaa ka hadlay arimo badan oo ku saabsan dastuurka cusub ee Soomaaliya waxaana dhanka kale ra’iisul... Madaxweynaha dowaldda TFG oo maanta degmada Balcad booqday. Aug 1, 2012 Madaxweynaha dowladda TFG Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta booqday degmada Balcad ee Shabeelaha dhexe waxaana halkaa uu kulamo kula soo qaatay aqoonyahanada iyo saraakiisha dowladda iyo AMISOM ee degamadaa ku sugan.
Madaxweynaha socodkiisa waxaa ku wehlinaayay saraakiil ka mid ah Xooga dalka Soomaaliya iyo AMISOM, waxaana markii ay Balcad tageen madaxweynaha uu bilaabay in warshadii dharaka ee Balcad... WAR DEG DEG:- Dastuurkii cusbaa ee Soomaaliya oo la ansixiyay. Aug 1, 2012 Waxaa goor dhaw si ku meel gaar ah loo ansixiyay dastuurka cusub ee Soomaaliya oo maalmahaan doodiisa ay socotay, waxaana lagu ansixiyay cod aad u badan.
Dastuurkaan ayaa waxaa maanta u codeeyay 645 qof waxaana loo codeeyay cod gacan taag ah, iyadoona halkaasi uu goob joog ka ahaa ra’iisul wasaaraha xukuumada TFG.
Hadaba Ergada Haa ku ansixisay ayaa tiradooda ah 621 oo u dhiganta 96% Maya 13... Marxuum Marshaale oo magaalada Muqdisho lagu aasaayo. Aug 1, 2012 Waxaa lagu wadaa in maanta Magaalada Muqdisho lagu aaso Allaha u naxariitee majaajiliistihii caanka ahaa Marshaale oo xalay magaalada Xamar lagu dilay.
Marxuumka ayaa Meydikiisa waxaa laga soo qaadayaa Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, waxaana aaskiisa lagu wadaa inay ka qeyb galaan dad magac ku leh bulshada dhexdeeda.
Sidoo kale waxaa aaska marxuumka ka qeyb gali doona Fanaaniinta ku sugam... Effect of Draft Constitution: End of Somalia, Not End of Transition- By Mr. Mohamud M Uluso Aug 1, 2012 The International Community (IC) has delivered a pre-approved mandatory “Draft Provisional Constitution (DPC)” to 135 “Traditional Leaders (TLs)” and 825-member “National Constituent Assembly (NCA) with the official message that both groups are not allowed to make amendments to the draft document or to reject it. The UN-led Constitution-Making Process for Somalia could be described all but... Qaraxyo lagu weeraray halka uu ka soconaayay Shirka Ergada Ansixinta Dastuurka cusub ee Soomaaliya. Aug 1, 2012 Qaraxyo Ismiidaamin ahaa ayaa saaka waxaa lagu weeraray halka uu ka soconaayo Shirka Ergada Anisinta Dastuurka cusub ee Soomaaliya, waxaana qaraxyadaasi geestay dad naftooda soo biimeeyay.
Laba qof oo walxaha qarxa isku xira ayaa isku dayey inay gudaha u galaan halka uu ka soconaayo shirka laakiinse waxaa ka hor yimid ciidamo ka mid ah AMISOM, waxaana la toogtay mid ka mid ah dadkii ismiidaamiyay.